အင်တာနက်မှာ အရိုးအရှင်းဆုံးငွေရှာနည်း( ၃) | zawthwin(android software/gameနှင့်မြန်မာစာအုပ်စင်) ကိုဇော်သွင်မျှဝေပေးပြီ
Posted on September 19, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	အွန်လိုင်းမှာငွေရှာနည်းလေးပါ။သိတဲ့ သူတွေမိတ်ဆွေတွေကတော့ ကျော်သွားလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် အောက်မှာလုပ်ပုံလုပ်နည်းကိုအသေးစိတ်ပြထားပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။တကယ့် ကိုအရိုးအရှင်းဆုံးနဲ့ အထိအရောက်ဆုံးရှာဖွေနိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးမို့ 
ပြန်လည်မျှဝေလိုက်တာပါ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း လောလောဆယ်လုပ်ကိုင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။မိတ်ဆွေတို့ အနေနဲ့ လည်း လုပ်ရင်းကိုင်ရင်းနဲ့ ဝင်ငွေတွေရစေချင်တဲ့ စိတ်တစ်ခုနဲ့ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဇွဲ ရှိ့ ဖို့ နဲ့တစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်ကိုင်သွားဖို့ ပဲလိုပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲအရင်ဆုံး ဒီနေရာ ကနေ Register လုပ်လိုက်ပါ့ Register လုပ်တဲ့နေရာရောက်ရင် Username , Passwords , Email , Birth Year တို့မှာ မိမိအသုံးပြုမယ့်လိပ်စာတွေဖြည့်ပါ..ပြီးတာနဲ့ Referrer မှာUsername ကနာမည်ဘဲပြန်ဖြည့်ပြီး အောက်မှာပေးထားတဲ့ လုံခြုံရေးကုဒ်ကိုဖြည့်ကာ Create My Account ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် Email အတည်ပြုချက်တောင်းတဲ့ Page ကိုရောက်သွားပါမယ်.. Email ထဲကိုသွားပြီး Verifiedလုပ်လိုက်တာနဲ့ မိမိအကောင့်ဟာ စတင်အသုံးပြုလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ အခုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်ရမှာက သူ့ဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကြော်ငြာတွကို ကလစ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ် သူ့ရဲ့ကြော်ငြာတွကိုကလစ်ပေးချင်းအားဖြစ် ပုံမှန်ငွေရရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်.
အရင်ဆုံးအနေနဲ့မိမိတို့ အချိန်ကုန်ပြီးထိုင်ကလစ်စရာမလိုအောင် auto ကလစ်လုပ်နိုင်မဲ့ နည်းလမ်းလေးကိုအရင်ဆုံးမိမိတို့browser မှာထည့် သွင်းထားလိုက်ပါ။ ပုံမှာပြထားတဲ့ အတိုင်း ADD ON ဆိုတာလေးကိုနိပ်ပေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ADD ON GRACE MONEY
ဒါကတော့ AUTO CLICK လုပ်ပေးမဲ့ ကောင်လေးပါပဲ သူကို့ လည်းဒီမှာ INSTALL လုပ်ရမှာပါ
အကောက်ထဲ ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် My Account ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ အောက်က ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း တွေရပါမည် ။ အခုကျနော် နမူနာပြထားတဲ့ Main Balance ထဲမှာ $ 0.1730 ဆိုပြီးကြော်ငြာတွေကို ကလစ်လို့ရထားတဲ့ ငွေအချို့ကို
အိုကေ..အောက်မယ်ပြထားတဲ့ ပုံထဲက Rent Referrals ဆိုတဲ့ အရုပ်လေးကို ကလစ်လိုက်ပါ။ ကလစ်လိုက်တာနဲ့ ရှယ်ယာ ၀ယ်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားပါလိမ့်မယ်..အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ..
လိုက်ပါ…၀ယ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့MyAccountရဲ့အောက်ဆုံးမှာအောက်ပါပုံအတိုင်းရှယ်ယာသုံးခုဝယ်ပီးကြောင်း ပြပါလိမ့်မယ် အိုကေ ရှယ်ယာသုံးခုဝယ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ သုံးရက်လောက် ပုံမှန်အတိုင်း ကြော်ငြာတွေကို ကလစ်သွားပါ..ရတဲ့ပိုက်ဆံ
Rented Referrals လေးကို ကလစ်လုပ်လိုက်ပါ..အောက်ပုံကိုကြည့်ပါ။ အဲဒီမှာ ကျနော်ဝယ်ထားတဲ့ ရှယ်ယာသုံးခုကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်.. ထိပ်ဆုံးက AutoPlay ကို Enabled ထားပေးပါ.
နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကျရင် Avg တက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်.. ( မှတ်ချက်- ရှယ်ယာဝယ်ပြီးတာနဲ့ Avg တက်မတက်ကို လေးရက်လောက်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်..ချက်ချင်းမတက်ပါ..
ကောင်း.. Avg 2.000 ထက်မကျော်တဲ့ ကောင်တွေကို Recycle သာလုပ်ပစ်မှာ Avg0ကနေပြန်စပါလိမ့်စေ..) ..
ဒီမှာ like လုပ်ခဲ့ ပါ။
This entry was posted in အွန်လိုင်းမှာငွေရှာနည်း. Bookmark the permalink.
← iOS7Download For All Supported Devices	iOS တွေအတွက် TinyUmbrella v6.14.00 ဖြင့် SHSH blobs ကို save နည်း →
4 thoughts on “အင်တာနက်မှာ အရိုးအရှင်းဆုံးငွေရှာနည်း( ၃)”	tunarkar says:	September 19, 2013 at 7:45 pm	probux မှာကျွန်တော် ကလစ်နေတာ ၃ လရှိပါပြီ အကိုပြောသလို $0.80 ပြည့်ရင် ရှယ်ယာ ၃ ခုဝယ်လိုက်တယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် နောက် ၁လ လောက်ကြာတော့ ရှယ်ယာ က expired သာဖြစ်သွားတယ် ရလာတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ နောက်ထပ်ရှယ်ယာ ၃ ခုပဲဝယ်နိူင်တယ် ၀ယ်လိုက် ကုန်လိုက်နဲ့ အခုလက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေတာ ရှယ်ယာ ၃ ခုနဲ့ main balance ထဲမှာ $0.55 ပဲရှိပါတယ် ကျွန်တော်သိချင်တာက $0.60 ပေးပြီး ၀ယ်လိုက်တဲ့ဟာက ပြန်ရတာက ပိုပြီးတော့တောင်နည်းနေသေးတယ် အဲဒီတော့ ၀ယ်တာက ဘာအကျိုးရှိလဲ သိချင်တာပါ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ၁ နှုစ်ပြည့်သွားလို့တောင် ပိုက်ဆံက $ 10 တောင်ရမယ်မထင်ဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံလေးတစ်ချက်လောက်ပေးပါဦး အကို
Reply	tunarkar says:	September 19, 2013 at 7:45 pm	probux မှာကျွန်တော် ကလစ်နေတာ ၃ လရှိပါပြီ အကိုပြောသလို $0.80 ပြည့်ရင် ရှယ်ယာ ၃ ခုဝယ်လိုက်တယ်ဗျာ ဒါပေမယ့် နောက် ၁လ လောက်ကြာတော့ ရှယ်ယာ က expired သာဖြစ်သွားတယ် ရလာတဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ နောက်ထပ်ရှယ်ယာ ၃ ခုပဲဝယ်နိူင်တယ် ၀ယ်လိုက် ကုန်လိုက်နဲ့ အခုလက်ရှိ အလုပ်လုပ်နေတာ ရှယ်ယာ ၃ ခုနဲ့ main balance ထဲမှာ $0.55 ပဲရှိပါတယ် ကျွန်တော်သိချင်တာက $0.60 ပေးပြီး ၀ယ်လိုက်တဲ့ဟာက ပြန်ရတာက ပိုပြီးတော့တောင်နည်းနေသေးတယ် အဲဒီတော့ ၀ယ်တာက ဘာအကျိုးရှိလဲ သိချင်တာပါ ဒီအတိုင်းဆိုရင် ၁ နှုစ်ပြည့်သွားလို့တောင် ပိုက်ဆံက $ 10 တောင်ရမယ်မထင်ဘူး ကျေးဇူးပြုပြီး အကြံလေးတစ်ချက်လောက်ပေးပါဦး အကို
Reply	thu ya says:	September 23, 2013 at 11:26 pm	အကို﻿ရေemail verifiedလုပ်﻿တယ်﻿ဆိုတာနည်းနည်းရှင်းပြပါဦးကျွန်﻿တော်﻿ကတုံးတယ်﻿ဗျ ကျေးဇူးပြုပြီး﻿တော့